ပုရိသတွေဟာ စကီလေးတွေ အစား Sex Robot တွေကို ပိုဖီးလ် လာတယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြ | Myanmar Mobile App
Home Trending Gadget ပုရိသတွေဟာ စကီလေးတွေ အစား Sex Robot တွေကို ပိုဖီးလ် လာတယ်လို့ စစ်တမ်းက ဖော်ပြ
Sex Robot များဟာ တကယ့် အမျိုးသမီးများနဲ့ အရမ်းကို တူလာကြပါပြီ။ ဥာဏ်ရည်တု နည်းပညာများလည်း ပါလာပြီး လူတွေနဲ့ စကားပြောနိုင်ပါတယ်။ လူတွေရဲ့ ခံစားချက်များကိုလည်း သိနားလည်ကြပါတယ်။ ဒါ့အပြင် လူသား အမျိုးသမီးများ မပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ထူးခြား ဆန်းသစ်တဲ့ ဖီးလ်မျိုးကိုလည်း ပေးစွမ်းနိုင်ပါတယ်။ အနာဂတ်မှာ စကီလေးတွေ နေရာကို လိင် စက်ရုပ်တွေက လုယူတော့မယ်ဆိုတာကို သက်သေပြတဲ့ စစ်တမ်းတစ်ခု အခု ထွက်ပေါ်လာပါတယ်။
ဖင်လန်မှ University of Helsinki က လူပေါင်း ၄၃၂ ဦးဖြင့် စစ်တမ်း ကောက်ယူခဲ့ရာမှာ ပုရိသ အများစုက ပြည့်တန်ဆာများထက် လိင် စက်ရုပ်များနဲ့ အခကြေးငွေဖြင့် ပိုပြီး ပျော်ပါးချင်ကြတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။ စစ်တမ်းက အိမ်ထောင်သည်များဟာ အိမ်ထောင် မရှိသူများထက် ဆောင်ကြာမြိုင်ကို ပိုသွားကြတယ်လို့လည်း ဖော်ပြထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်သည်များရော၊ အိမ်ထောင် မရှိသူများက အမျိုးသမီး ပြည့်တန်ဆာများထက် လိင် စက်ရုပ်များနဲ့ ပိုပျော်ပါးချင်ကြတယ်လို့ ပြောကြပါတယ်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်တုန်းက ဆိုင်ဘာ လုံခြုံရေး ပညာရှင် ဒေါက်တာ Nick Patterson က သူ့ရဲ့ Sex Robots များနဲ့ ပတ်သက်တဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှုကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ သူက ဟက်ကာများဟာ Sex Robots များကို ထိန်းချုပ်၍ လူသတ် သမားအဖြစ် အသုံးချလာနိုင်တယ်လို့ ထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ အနာဂတ် Sex Robots များမှာ လက်နက်များ၊ ဓါးများကို တပ်ဆင်လာနိုင်ကြမှာပါ။ သူက “ ဟက်ကာများဟာ Sex Robots များကို ဟက်ခြင်းဖြင့် စက်ရုပ်ရဲ့ ခြေထောက်များ၊ လက်များနဲ့ ဓါးတို့လို တပ်ဆင်ထားတဲ့ ကိရိယာများကို အပြည့်အ၀ထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဲဒီ စက်ရုပ်များဟာ ပေါင် ၂၀၀ အထိ အလေးချိန်ရှိနိုင်ပြီး အလွန် သန်မာပါတယ်။ “ လို့ ပြောပါတယ်။
ပုရိသတွေက လိင် စက်ရုပ်များကို ပိုစွဲလမ်းလာကြတဲ့ အခု သတင်းနဲ့အတူ ဒေါက်တာ Nick Patterson ရဲ့ ဟောကိန်းအရ ဆိုရင်တော့ အနာဂတ်မှာ ပုရိသတွေဟာ လိင် စက်ရုပ်တွေရဲ့ လက်ချက်နဲ့ မျိုးပြုတ်သွားမလား ?
ပုရိသတှဟော စကီလေးတှေ အစား Sex Robot တှကေို ပိုဖီးလျ လာတယျလို့ စဈတမျးက ဖျောပွ
Sex Robot မြားဟာ တကယျ့ အမြိုးသမီးမြားနဲ့ အရမျးကို တူလာကွပါပွီ။ ဉာဏျရညျတု နညျးပညာမြားလညျး ပါလာပွီး လူတှနေဲ့ စကားပွောနိုငျပါတယျ။ လူတှရေဲ့ ခံစားခကျြမြားကိုလညျး သိနားလညျကွပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ လူသား အမြိုးသမီးမြား မပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ထူးခွား ဆနျးသဈတဲ့ ဖီးလျမြိုးကိုလညျး ပေးစှမျးနိုငျပါတယျ။ အနာဂတျမှာ စကီလေးတှေ နရောကို လိငျ စကျရုပျတှကေ လုယူတော့မယျဆိုတာကို သကျသပွေတဲ့ စဈတမျးတဈခု အခု ထှကျပျေါလာပါတယျ။
ဖငျလနျမှ University of Helsinki က လူပေါငျး ၄၃၂ ဦးဖွငျ့ စဈတမျး ကောကျယူခဲ့ရာမှာ ပုရိသ အမြားစုက ပွညျ့တနျဆာမြားထကျ လိငျ စကျရုပျမြားနဲ့ အခကွေးငှဖွေငျ့ ပိုပွီး ပြျောပါးခငျြကွတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။ စဈတမျးက အိမျထောငျသညျမြားဟာ အိမျထောငျ မရှိသူမြားထကျ ဆောငျကွာမွိုငျကို ပိုသှားကွတယျလို့လညျး ဖျောပွထားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အိမျထောငျသညျမြားရော၊ အိမျထောငျ မရှိသူမြားက အမြိုးသမီး ပွညျ့တနျဆာမြားထကျ လိငျ စကျရုပျမြားနဲ့ ပိုပြျောပါးခငျြကွတယျလို့ ပွောကွပါတယျ။
၂၀၁၇ ခုနှဈတုနျးက ဆိုငျဘာ လုံခွုံရေး ပညာရှငျ ဒေါကျတာ Nick Patterson က သူ့ရဲ့ Sex Robots မြားနဲ့ ပတျသကျတဲ့ စိုးရိမျပူပနျမှုကို ပွောကွားခဲ့ပါတယျ။ သူက ဟကျကာမြားဟာ Sex Robots မြားကို ထိနျးခြုပျ၍ လူသတျ သမားအဖွဈ အသုံးခလြာနိုငျတယျလို့ ထောကျပွခဲ့ပါတယျ။ အနာဂတျ Sex Robots မြားမှာ လကျနကျမြား၊ ဓါးမြားကို တပျဆငျလာနိုငျကွမှာပါ။ သူက “ ဟကျကာမြားဟာ Sex Robots မြားကို ဟကျခွငျးဖွငျ့ စကျရုပျရဲ့ ခွထေောကျမြား၊ လကျမြားနဲ့ ဓါးတို့လို တပျဆငျထားတဲ့ ကိရိယာမြားကို အပွညျ့အဝထိနျးခြုပျနိုငျပါတယျ။ အဲဒီ စကျရုပျမြားဟာ ပေါငျ ၂၀၀ အထိ အလေးခြိနျရှိနိုငျပွီး အလှနျ သနျမာပါတယျ။ “ လို့ ပွောပါတယျ။
ပုရိသတှကေ လိငျ စကျရုပျမြားကို ပိုစှဲလမျးလာကွတဲ့ အခု သတငျးနဲ့အတူ ဒေါကျတာ Nick Patterson ရဲ့ ဟောကိနျးအရ ဆိုရငျတော့ အနာဂတျမှာ ပုရိသတှဟော လိငျ စကျရုပျတှရေဲ့ လကျခကျြနဲ့ မြိုးပွုတျသှားမလား ?
Previous article၂၀၁၈ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် ဘောနပ်စ်၁၂မီလျံရခဲ့လို့ ဒေါ်လာ၁၃၆မီလျံအထိပိုင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့ စီအီးအိုတင်ကွတ်ခ်
Next articleခြေထောက်များ ပါတဲ့ ကားကို ဖန်တီးနေတဲ့ ဟွန်ဒိုင်း